Cristiano Ronaldo oo sadex Cayaaryahan iyo Macalin Zinedine Zidane Canbaareeyey | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cristiano Ronaldo oo sadex Cayaaryahan iyo Macalin Zinedine Zidane Canbaareeyey
(20-11-2017) Weeraryahanka kooxda kubada Cagta Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa Weerar ku qaaday 3 ka mid ah Cayaartoyda ay isku Naadiga yihiin iyo Macalinkiisa Zinedine Zidane kadib kulankii ay Atletico Madrid lagaleen bareejada 0-0 ah.
Cristiano Ronaldo ayaa lasheegayaa in uu xanaaq muujiyey intii lagu gida jirey qaybta Nasiinada Cayaartii ka dhacday Garoonka Wanda Metropolitano,isaga oo aan ku qanacsamayn qaab cayaareedkii xumaa ee kooxdiisa.
Wargeyska Diario Gol, ayaa daabacay in Cristiano Ronaldo uu canbaareeyey Cayaartoyda kala ah Isco, Marco Asensio iyo Luka Modric.kuwaas oo uu sheegay in ay haayeen kuwo aan kubada u baaseyn si uu Gool u dhaliyo isaga oo sidoo kale sheegay in arintaas ay socotey 3 dii Cayaarood ee la soo dhaafay taasna uu qax kaqaban waayey Macalin Zinedine Zidane.
Ronaldo ayaa sidoo kale sheegay in aysan kubadaha u baasin Cayaartoyda Real Madrid hadana lagu eedeeyo isaga hoos u dhaca xiligaan ku dhacay kooxda hadana aysan jirin iskaashi Cayaartoyda kooxdaas waxaana jira ayuu yiri cuqdad u dhaxaysa gudaha Naadiga.
Xiddiga dalka Portugal ayaa dhawaan cadeeyey in uusan heshiis cusub u Saxiixi doonin Real Madrid isla Markaana laga yaabo in uu katago Naadiga dalka Spain.